खुकुलो बनाउँदै एक साता निषेधाज्ञा थप : के-के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ? (आदेशसहित) « News24 : Premium News Channel
खुकुलो बनाउँदै एक साता निषेधाज्ञा थप : के-के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ? (आदेशसहित)
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउँदै एक साता लम्ब्याइएको छ । सोमबार बसेको उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले भोलि (म)गलबार)बाट एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौंका सीडीओ कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार बैठकले २५ सिट वा सोभन्दा माथि सिट क्षमता भएका सार्वजनिक सवारीसाधन भोलिदेखि जोर बिजोर प्रणालीबाट सञ्‍चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म चलाउन पाइने सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, बसमा स्यानिटाइजर राख्ने तथा सिटमा यात्रुको दूरी कायम हुनुपर्ने जनाइएको छ।
गत वैशाख १६ देखि काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञामा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिइएको थिएन ।
त्यस्तै तरकारी, फलफूल, खाधान्न, दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ र सोको प्याकिङ सामग्री, कुखुराको दाना, चला र पशुपंछीजन्य पदार्थ, भेटनरी सम्बन्धी कार्य, ईन्धन, खाना पकाउने ग्यास, सरसफाईमा प्रयोग गरिने सामग्री, प्रिन्ट तथा सरकारी छापाखाना र कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मल, वीउ लगायतका सामग्री बोक्ने सवारीले न्यूनतम जनशक्ति प्रयोग गरी संचालन गर्न पाउने छ ।
खुला स्थानमा मानिसहरु भेला जम्मा हुन, भिडभाड गर्न, सभा जुलुस, जात्रा, महोत्सव, भोज भतेर पनि रोक लगाइको छ । । यस्तै शैक्षिक संस्थाहरु विघालय, कलेज, ट्यूसन सेन्टर, तालिम केन्द्रले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन परीक्षाहरु संचालन गर्न गराउन नपाउने भनिएको छ ।